‪#‎Myanmar‬’s 2015 General Elections Special Collections « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » ‪#‎Myanmar‬’s 2015 General Elections Special Collections
‪#‎Myanmar‬’s 2015 General Elections Special Collections
1. ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်သင့်သလဲ?
ဒီတစ်ပတ် အစီအစဉ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်သင့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ရန်ကုန်မြို့က ဗေဒါလူငယ်သင်တန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရုံး တာဝန်ခံ ဦးနေမိုးအောင်နဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကွန်ရက် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မသဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်တို့နဲ့အတူ ဦးခင်မောင်ညိန်းက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
2. ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အာဏာပိုင်တွေ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်
အခုတစ်ပတ်ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာလာမယ့်၂ဝ၁၅ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Burma Democratic Concern (BDC) အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦး မျိုးထိုက်တန်သိန်း ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်-လွတ်မြောက်နယ်မြေ NLD-LA တောင်ကိုရိယားဌာနခွဲ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးရန်နိုင်ထွန်းတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
3. ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု ဆွေနွေးချက်
ဒီတစ်ပတ် အစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်းတွေမှာအမှားအယွင်းတွေ အမြောက်အများ ပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီး၁၉၉ဝပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာတင့်ဆွေနဲ့ဝါရင့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံကဦးညွန့်လှနဲ့ ဦးတင်မောင်ထူးတို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Tags: 1990 election, 2008 constitution, 2010 election, 2012 election, 2015 general election, Aung San Suu Kyi, BAYDA Institute, Burma, Burma Democratic Concern (BDC), burmese, daw aung san suu kyi, electrol roll, Myanmar, Myanmar 2015 General Election, Myanmar general election, Myo Yan Naung Thein, voters list
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 06/07/2015 .
← #Myanmar: ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု ဆွေနွေးချက်	#MyanmarElectoralRight မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးရေး အထောက်အထားနှင့် Institutional Demand – အောင်ထွန်းလင်း by Myanmartandawsint Newspaper →